PSG oo diyaar u ah De Gea, Kante oo rabitaan loo muujiyay, Arsenal oo qiimo yar ku dooneysa Zahta & Wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. – Gool FM
(Yurub) 19 Maajo 2019. Maalin wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo aad joogtaan, kusoo dhawaada xubinta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo taxane inoo ahaan doonta, waxaan idiin soo koobi doonaa wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxaha qaaradda yurub.
Manchester City ayaa ugu cad cad iney lasoo saxiixato xiddiga khadka dhexe Atletico Madrid Rodrigo, 22-jirkaan ayaa imaanaya Premier League, balse Guardiola waa inuu marka hore iibiyo Garbriel Jesus oo isna 22-jir ah. (Sun)
Paris Saint Germain ayaa ku boorineysa goolhaye David de Gea oo 28-jir ah inuu soo afjaro waayahiisa kooxda Red Devils isla markaana uu si xor ah ugu yimaado. (Express)
Arsenal ayaa dooneysa iney lasoo saxiixato Wilfried Zaha, balse kaliya waxey dooneysaa iney bixiso 40 Malyan oo Pound waana qiimo aad uga yar lacagaha ay duldhigtay kooxdiisa Palace. (Sun)
Paris Saint Germain waxey sidoo kale dooneysaa iney dooqa koowaad ee saxiixyada xagaagan ka dhigato xiddiga reer France “N’Golo Kante”, 28-jirkaan wuxuu ka tirsan yahay Blues. (Mirror)
Tottenham Hotspur ayaa u weecan doonta tababaraha shaqada Juventus ka tagaya ee Massimiliano Allegri hadii uu kooxda ka tago Mauricio Pochettino kadib final-ka Champions League. (Express)
Gareth Bale oo 29-jir ah, Keylor Navas oo 32-jir ah, Ceballos oo 22-jir ah iyo Llorente oo 24-jir ah ayaa laga yaabaa iney maanta ciyaaraan kulankoodii ugu dambeeyay Madrid isagana tagaan xagaaga. (Marca)
Tababaraha Spurs Mauricio Pochettino waxaa lala xiriirinayaa kooxo badan oo qaaradda yurub ka dhisan, balse si gaar ah Bayern Munich. (Star)
Chelsea ayaa laga yaabaa iney 18-jirkooda reer England Callum Hudson-Odoi ka dalbato inuu xirto maaliyadda uu siibi doono Eden Hazard, waxeyna doonayaan arrintaas darteed inuu ku saxiixo heshiis cusub. (Mail)
Man United ayaa kalsooni weyn ku qabta in Marcus Rashford oo 21-jir ah uu saxiixi doono heshiis cusub oo isbuucii uu ku qaadanayo 300,000 kun oo Pound, waana in saddex jibaar ka badan mushaarkiisa hadda. (Star)
Manchester United ayaan dooneynin iney iibiso Paul Pogba, xiddiga reer France waxaa loo sheegay inuu kooxdiisa u gudbiyo warqad uu kaga codsanayo iney iibiso si uu ugu wareego kooxda Real Madrid. (Sun)
Yaa dhib badan in lagu guuleysto Champions League & Saddexleyda maxaliga ah? - Tababare Pep Guardiola ayaa ka jawaabaya